Tag: taking content | Martech Zone
Tag: qaadashada waxyaabaha
Seth wuxuu boggiisa ku leeyahay qoraal xusuusinaya inaan qoro tan. Waan jeclahay blogging. Laakiin waan necbahay bloggards. Waa erey cusub oo aan qalinka ugu duugay dadka wax qora iyo kuwa caajiska badan ee blog-ka - laakiin waxay si fudud u dib u cusbooneysiin lahaayeen baloog kale, mararka qaarkoodna erey ahaan. Waa caajis waana wax xatooyo badan maadaama hits laga yaabo inay kaliya ku sameyso boggooda halkii blogger asal ah. Hadda, haddii aad leedahay wax kaa soo horjeeda